Save The Library in Myanmar | News
မျက်ပွင့်စာပေမှ တာဝန်ယူ ဖြန့်ချိလျှက်ရှိသော စာအုပ်များအားလုံးကို 0nline စာအုပ်ဈေးရောင်းပွဲတော်ကြီးအဖြစ် ပြုလုပ်တော့မှာမို့ စာဖတ်သူအားလုံး နီးစပ်ရာ မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းများကို အသိပေး အကြောင်းကြားပြီး အဆင်သင့်လုပ်ထားကြပါ။
ပွဲတော်ကျင်းပမည့် ရက်ကတော့ 20 Dec 2020 မှ 30 Dec 2020 အထိပဲနော်။
၁၀ ရာခိုင်နှုန်း လျှော့ဈေး (10% off) ဖြင့် အမျိုးအစားစုံ စာအုပ် (၄၀၀) ကျော်ကို ရွေးချယ် မှာယူနိုင်မှာဖြစ်ပြီး ဘယ်နှစ်အုပ်မှာမှာ ပို့ခကတော့ အခမဲ့ (free delivery) ပဲနော်။
စာအုပ်စာရင်းနှင့် ဖတ်ညွှန်းတွေကိုတော့ မျက်ပွင့်စာပေထုတ်ဝေရေး၏ Facebook Page စာမျက်နှာ (မျက်ပွင့်စာပေထုတ်ဝေရေး)
တွင် ကြည့်ရှုနိုင်မှာ ဖြစ်ပါသည်။
ဒီသတင်းက ဒီမှာတင် မပြီးသေးဘူးနော် . . . ။ ကံစမ်းမဲအစီအစဉ်နဲ့ လက်ဆောင်အစီအစဉ်တွေလည်း ပေးဦးမှာပါ . . . ။
သင် ပါဝင် ကံစမ်းမယ်ဆိုရင်တော့
၁။ ဒီ Post ကို Like and Share လုပ်ပေးပါ။
၂။ Facebook Group ၅ နေရာကို Share ထားပြီးတဲ့အကြောင်း Screenshot ရိုက်ပါ။
၃။ Screenshot ၅မျိုးစလုံးကို ဒီ Post မှာ လာမန့်ပြီးရင်တော့ ကံစမ်းမဲဖောက်ပေးမယ့် ၃၁ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၀ ရက်နေ့ မနက် ကံထူးရှင် (၁၀၀) ရွေးချယ်ပွဲကြီးကို စောင့်ကြည့်ဖို့ပဲ လိုပါတော့မယ် . . . ။
သင်ဟာ ကံထူးရှင် (၁၀၀) ထဲက တစ်ယောက် ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုလျှင်
မျက်ပွင့်စာပေဖြန့်ချိရေးမှ တာဝန်ယူ ဖြန့်ချိထားသော အမျိုးအစားစုံ စာအုပ်(၄၀၀)ကျော်ထဲကမှ ၂၀၀၀၀ ကျပ် တန်ဖိုးနှင့် ညီမျှတဲ့ ကြိုက်နှစ်သက်ရာ စာအုပ်တစ်အုပ်ချင်းစီကို ရွေးချယ်ရယူနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
5 January 2021 ရက်နေ့ မတိုင်မီအတွင်း ကြိုက်နှစ်သက်ရာ စာအုပ်တစ်မျိုးစီကို ရွေးပြီး စာရင်းနဲ့ လိပ်စာကို Messenger မှာ ပြန်လည်ပေးပို့လိုက်ရုံပါပဲ။
ကံစမ်းမဲ ဖွင့်လှစ်မယ့် အစီအစဉ်ကတော့
သတ်မှတ်ချက်နှင့် ကိုက်ညီပြီး Like & Share(Public) ပြုလုပ်ထားသူများဟာ ထောင်ချီနေရင်တောင်မှ နံပါတ်နှင့် အမည်စာရင်းအားလုံးကို အရင်ထုတ်ပြန်ပေးပြီးမှ နံပါတ်စဉ်များကို ကျပန်းနည်းဖြင့် ဖော်ပြစေပြီး မှန်မှန်ကန်ကန် ရွေးချယ်ပေးမှာ ဖြစ်ပါသည်။
ကံစမ်းမဲပေါက်သည့် နံပါတ်နှင့်အမည်စာရင်းကို 31 Dec 2020 မနက် 9:00 မှ 11:00 အတွင်းတွင် တိုက်ရိုက် Live ကြည့်ရှုနိုင်မှာ ဖြစ်ပါသည်။
စာပေချစ်သူများ ကံစမ်းမဲ အစီအစဉ်မှာ ပါဝင်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ယခုမှစတင်ပြီး ပါဝင်နိုင်ပါပြီ။
မျက်ပွင့်စာပေမှ တာ၀န်ယူ ဖြန့်ချိလျှက်ရှိသော စာအုပ်များအားလုံးကို 0nline စာအုပ်စျေးရောင်းပွဲတော်ကြီးအဖြစ် ပြုလုပ်တော့မှာမို့ စာဖတ်သူအားလုံး နီးစပ်ရာ မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းများကို အသိပေး အကြောင်းကြားပြီး အဆင်သင့်လုပ်ထားကြပါ။
ပွဲတော်ကျင်းပမည့် ရက်ကတော့ 20 Dec 2020 မှ 30 Dec 2020 အထိပဲနော်။
၁၀ ရာခိုင်နှုန်း လျှော့စျေး (10% off) ဖြင့် အမျိုးအစားစုံ စာအုပ် (၄၀၀) ကျော်ကို ရွေးချယ် မှာယူနိုင်မှာဖြစ်ပြီး ဘယ်နှစ်အုပ်မှာမှာ ပို့ခကတော့ အခမဲ့ (free delivery) ပဲနော်။
စာအုပ်စာရင်းနှင့် ဖတ်ညွှန်းတွေကိုတော့ မျက်ပွင့်စာပေထုတ်ဝေရေး၏ Facebook Page စာမျက်နှာ (မျက်ပွင့်စာပေထုတ်ဝေရေး)
တွင် ကြည့်ရှုနိုင်မှာ ဖြစ်ပါသည်။
သင် ပါ၀င် ကံစမ်းမယ်ဆိုရင်တော့
၃။ Screenshot ၅မျိုးစလုံးကို ဒီ Post မှာ လာမန့်ပြီးရင်တော့ ကံစမ်းမဲဖောက်ပေးမယ့် ၃၁ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၀ ရက်နေ့ မနက် ကံထူးရှင် (၁၀၀) ရွေးချယ်ပွဲကြီးကို စောင့်ကြည့်ဖို့ပဲ လိုပါတော့မယ် . . . ။
မျက်ပွင့်စာပေဖြန့်ချိရေးမှ တာ၀န်ယူ ဖြန့်ချိထားသော အမျိုးအစားစုံ စာအုပ်(၄၀၀)ကျော်ထဲကမှ ၂၀၀၀၀ ကျပ် တန်ဖိုးနှင့် ညီမျှတဲ့ ကြိုက်နှစ်သက်ရာ စာအုပ်တစ်အုပ်ချင်းစီကို ရွေးချယ်ရယူနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကံစမ်းမဲ ဖွင့်လှစ်မယ့် အစီအစဉ်ကတော့
သတ်မှတ်ချက်နှင့် ကိုက်ညီပြီး Like & Share(Public) ပြုလုပ်ထားသူများဟာ ထောင်ချီနေရင်တောင်မှ နံပါတ်နှင့် အမည်စာရင်းအားလုံးကို အရင်ထုတ်ပြန်ပေးပြီးမှ နံပါတ်စဉ်များကို ကျပန်းနည်းဖြင့် ဖော်ပြစေပြီး မှန်မှန်ကန်ကန် ရွေးချယ်ပေးမှာ ဖြစ်ပါသည်။
ကံစမ်းမဲပေါက်သည့် နံပါတ်နှင့်အမည်စာရင်းကို 31 Dec 2020 မနက် 9:00 မှ 11:00 အတွင်းတွင် တိုက်ရိုက် Live ကြည့်ရှုနိုင်မှာ ဖြစ်ပါသည်။
စာပေချစ်သူများ ကံစမ်းမဲ အစီအစဉ်မှာ ပါ၀င်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ယခုမှစတင်ပြီး ပါ၀င်နိုင်ပါပြီ။
“သိပ္ပံရုပ်ရှင်ပွဲတော် ၂၀၂၀” ကို နိုဝင်ဘာလ (၂၈) ရက်နေ့မှ ဒီဇင်ဘာလ (၁၀) ရက်နေ့အထိ ကျင်းပပြုလုပ်မည်
ကိုယ်ထူ ကိုယ်ထ စာကြည့်တိုက်သမားများသို့ ပေးစာ (၁)
သတင်းစာဆရာ တက္ကသိုလ်စိန်တင် ကွယ်လွန်